Ataovy Veloma Ny Firindran’ny Tontolo Iainana Ao Amin’ilay Farihy Ela Indrindra Any Eoropa? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2015 20:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Magyar, Français, 日本語, Português, English
Loza mitatao ho an'ny fisian'ireo karazan-javaboahary maherin'ny zato tsy fahita firy sy an-dalam-pahataperana, manohintohina tanteraka ny firindran'ny zavaboahary ao amin'ilay farihy ela indrindra any Eoropa ilay fikasàna vaovao ny hanorina ivon-toerana fanaovana korisa ambony ranomandry, sy làlana ihany koa, ao amin'ny Valan-javaboahary Nasiônaly Galichica an'i Makedonia.
Ny faran'ny volana Aogositra 2015, nanambara ny vinavinan'asa maharitra 10 taona hanamboarana ho tanàn-dehibe ny ao amin'ny Farihy Ohrid sy ny valan-javaboahary Nasionaly Galichica, ny governemantan'i Makedonia, izay nahatohina tokoa ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenen'ny mpahay siansa sy ireo olom-pirenena Makedoniana maro. Vinavinaina hanomboka ao afovoan'ny Valan-javaboahary Nasionaly Galichica ilay fanamboarana, izay ampahan'ny Tahirin-javaboahary Mampifandray Sisintany Prespa-Ohrid — iray amin'ireo 15 monja sisa tavela eto an-tany. Ampahan'ny faritra midadaiska tafiditra ho Lovan'ny Tany napetraky ny UNESCO ihany koa ilay valan-javaboahary tsy manampaharoa.
Fonenana ho an'ireo karazana zava-maniry sy biby maherin'ny 5.330 isa i Galichica, izay tsy fahita firy ny 114 amin'izy ireo ary tsy hita na aiza na aiza eto an-tany ankoatry ny ao. Miaina ao amin'ny zava-manirin'i Galichica ireo lolo sy biby kely maherin'ny 1.500 isa, ao anatin'izany ny lolo Appolo (Parnassius Apollo) izay efa eo an-dalah-pahataperana. Mponina hafa mahavariana ao Galichica ihany koa ilay voninkazo kely Crocus Cvijiciir, izay mitovy amin'ny Appolo ihany koa, ao anatin'ny lisitra IUCN anà zavaboahary eo an-dalam-pahataperana ihany koa.
Fahatafintohinana lehibe ho an'ireo mpiaro ny tontolo iainana eo an-toerana sy mpikambana amin'ny vahoaka ao Makedonia, ilay fanapahan-kevitra vaovao nataon'ny governemanta Makedoniana hanamboarana ivon-toerana fanaovana korisa ambony ranomandry, làlana manivaka, ary faritra telo hampandrosoana ny fizahantany ao anatin'ilay toerana tahirin-javaboahary, nahatonga ny sasany tamin'izy ireo nanapa-kevitra ny hanao hetsika hanoherana ilay fanapahan-kevitra tamin'ny alalan'ny media sy fanangonan-tsonia, hanoherana ilay vinavinan'asa fampandrosoana ny faritra.
Nandritra ny fihainoana farany ny Tombana ara-Tontolo Iainana Stratejika an'ilay Drafi-Pitantanana ny Valan-javaboahary Nasionaly Galichica, nanazava ny iray tamin'ireo nandray fitenenana tamin'ilay fihainoana, Elizabeth Van Zyl, fa mila averina faritana ireo faritra sasany. Nandroso hevitra i Van Zyl hoe mba tsy ho ao amin'ny Fari-pitantanana amperinasa (ZAM) ilay toerana ary hafindra any amin'ny Faritra Azo ampiasaina Maharitra (ZSU), mba hahafahan'ny tetikasanà fotodrafitrasa hihitatra ao. Eo amin'ny 604 hekitara eo no fitambaran'ny haben'ny ZAM hovàna sokajin-toerana ho lasa ZSU.
Na teo aza ireo sosokevitra ireo, nanipika ihany koa i Van Zyl fa tokony ialàna araka izay tratra ny fanovàna sokajin-toerana toy izany:
Vahaolana farany ny fampidinana sokajin-toerana ary tokony ialàna araka izay tratra, na aiza , na rahoviana.
Mba hamenoana ny fahaverezan'ny firindran'ny zavaboahary manan-danja tokoa, hisy ireo fepetra horaisina, ary ho soloina amin'ireo faritra hafa misy karazan-javaboahary mitovy aminy, hita any amin'ny toerana hafa ao amin'ny firenena, ireo faritry ny valan-javaboahary izay hitaty vokatra ratsy avy tamin'ilay tetikasanà fampandrosoana novinavinaina.
“Ny olana amin'io drafitra io dia hanova tanteraka ny endriky ny toerana ny fiovàn'ny toetrandro, ary ao anatin'ny taona iray, mety hisy hetira (hêtre) haniry eo amin'ny ahitantsika oaka (chêne) ankehitriny. Izay mahatonga io drafitra io ho tsy misy ilàna azy,” hoy Mr.Lazo Naumoski, mpiaro ny tontolo iainana eo an-toerana.
Toa hita ho iray amin'ireo olana maro be mikasika ilay toerana tafiditra ho Lova ao amin'ny UNESCO io, ary mety hahita fahasimbàna lehibe amin'ny lafiny tontolo iainana i Makedonia, noho ny fifandraisana akaiky amin'ny Farihy Prespa, ny Havoana Galichica, ary ny Farihy Ohrid. Araka ny fikarohana vao haingana nataon'ireo mpahay siansa ao amin'ny Oniversite an'i Cologne, efa maherin'ny 1,2 tapitrisa taona ny Farihy Ohrid, mahatonga azy ho ny farihy antitra indrindra any Eoropa.
“Avy aminà loharano 40 ny rano ao amin'ny Farihy Ohrid, 17 ao Makedonia ary ny ambiny avy amin'ny faritra Albane. Manankarena aminà singa mahavelona sy PH tsy marin-toerana ny ankamaroan'ireo loharano ireo, fa feno kalsiôma izay mampifandanja ny zava-drehetra ireo loharano avy amin'i Galichica. Misy fifandraisana any ambanin'ny tany eo amin'ny Farihy Prespa sy ny Farihy Ohrid satria vaosokay ny Tendrombohitra Galichica, manome fahafahana ny rano ao amin'ny farihy Prespa hikoriana sy hankany amin'ny Farihy Ohrid. Hamoa-doza amin'ireo farihy natoraly roa amin'ireo telo ao Makedonia ianareo,” hoy Mr. Lazo Naumoski.
Misy ihany koa faminavinàna tetikasa fanamboarana faritra telo ho fampiroboroboana ny fizahantany manodidina ny sisin'ny Farihy Ohrid. Hotely, trano fandraisambahiny mihaja, ary morondranomasina voatr'olombelona, ireo no hisolo toerana harefo voaaro izay nitàna anjara tamin'ny fanivànana sy fanomezana otrikaina ho ao amin'ny farihy sy ireo mponina ao aminy.
“Ny fanimbàna ireo morony sy ireo harefo noho ireo asa fanamboarana, ny fotodrafitrasa mitombo hatrany, sy ny fitomboan'ny isan'ireo mpizahatany dia hitondra fiakaran'ny otrikaina ao amin'ny farihy, izay mety, hihitatra any amin'ny fahasimban'ny ampahany betsaka amin'ny toeram-ponenan'ireo biby mponina safatsiroa ao amin'ny Farihy Ohrid,” hoy ny fanazavan'ny Dr. Bernd Wagner, avy ao amin'ny Ivon-toeran'ny Zeolozia sy ny Harena an-kibon'ny tany, Anjerimanontolon'i Cologne.
Mba hanairana ny sain'ireo vahoaka amin'ny loza mitatao haterak'ireo tetikasa ireo amin'ny zava-maniry sy biby, namoaka fanambaràna sy nanao fanangonan-tsonia iraisam-pirenena ilay fandraisana andraikitra amin'ny maha-olompirenena, nomena anarana hoe SOS Ohrid. Efa 250 isa ireo manampahaizana iraisam-pirenena nanasonia ilay fanambaràna, ireo mpizahatany izay nitsidika an'i Makedonia ihany koa, ary ireo mpahay siansa avy amin'izao tontolo izao izay nanome tànana mba hanaikena ny maha-zava-dehibe ny Farihy Ohrid.
Raha jerena ny tondrozotran'i Makedonia amin'ny fanitàrana tanàn-dehibe hatreto, miaraka amin'i Skopje renivohitra, izay lasa tanàna maloto indrindra any Eoropa, noho ireo tetikasa fanorenana mitombo hatrany nanomboka ny taona 2012, mety ho tandindonin-doza io harena natoraly io ary hijoro hiatrika fahaverezana bebe kokoa noho izay sata maha-Lovan'ny Tany nametrahan'ny UNESCO ny Ohrid ilay firenena.